Qualcomm dia manana modem 5G miasa voalohany izay mifanaraka amin'ny finday | Androidsis
Qualcomm dia manana modem 5G miasa voalohany izay mifanaraka amin'ny finday
Ireo injenieran'ny Qualcomm Nahavita nanena be ny haben'ny modem 5G novolavolainy izy ireo, ka afaka nampiditra azy io tamin'ny finday.
Ny fenitra 5G dia maneho ny rafitra fifandraisan-davitra manaraka, ary ny daty andrasana amin'ny fanombohana ara-barotra azy dia ny taona 2019. Ny orinasa sasany, toy ny Qualcomm, dia miezaka mafy mba hahatratra io daty io, na koa hiandrasana ny hafa.
Tokony ho 1 taona lasa izay, nilaza izahay fa namorona i Qualcomm ny modem 5G voalohany, fantatra amin'ny anarana hoe X50. Ny prototype naseho tamin'izany fotoana izany dia tsy nanana ny famaritana rehetra naseho, na dia tamin'ny teny nataon'ny orinasa aza dia dingana iray lehibe izay natao hampisehoana fa tena misy ny teknolojia 5G.
Tamin'izany fotoana izany, ny modem dia ny haben'ny napkin ary arovan'ny efijery fitaratra.
Ankehitriny, nanambara indray ny modem X50 ny orinasa, na dia miaraka aza izany vaovao lehibe. Ny modem dia nahena ho refy mety indrindra amin'ny fampidirana azy amin'ny smartphone, ary koa ny fiasana tanteraka.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny chip 5G, Qualcomm dia nahatratra hahatratra ny hafainganam-pandehan'ny Gigabit amin'ny fampiasana fantsona 5 MHz 100G marobe ao amin'ny fantsom-pifamoivoizana 28 GHz. Ireo refesina avo lenta ireo dia manana fahaiza-manao lehibe kokoa raha oharina amin'ireo hatetika latsaky ny 3 GHz, ampiasaina amin'izao fotoana izao amin'ny tambajotra 4G LTE, saingy afaka mandeha lavitra lavitra.
Ny orinasa manantena modem X50 hampiasaina amin'ny mobiles 2019. Tamin'ny voalohany, ity haitao ity dia mety hiara-hiaina amin'ny 4G LTE, satria ny finday sasany dia mbola mampiasa tambajotra 3G ihany ankehitriny raha tsy misy ny tsara kokoa.
Tamin'ny voalohany, Ny fifandraisana 5G dia aseho ho maody turbo ho an'ny 4G, ary ireo mpandraharaha telefaona dia afaka manamafy ny fahafahan'ny tambajotra misy azy ireo.
Amin'ny farany, ny haitao 5G dia tokony hanome hafainganam-pandeha 10 heny haingana kokoa noho izay azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fenitra LTE.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Qualcomm dia manana modem 5G miasa voalohany izay mifanaraka amin'ny finday
Misaotra betsaka fa tiako be
Mora kokoa noho ny hatramin'izay ny fahazoana vokatra fanomezana amin'ny Yudonpay
Ny PC dia tsy manaiky ny Android, inona no ataoko?